Budata Duolingo maka Windows
Free Budata maka Windows (9.00 MB)
Duolingo bụ otu nime ngwa mmụta asụsụ mba ofesi kacha amasị na nyiwe niile. Akụkụ kacha pụta ìhè nke ngwa mmụta, nke ị nwere ike iji nefu iji mụta Bekee, German, Italian, French, Dutch, Portuguese, Danish, bụ na ọ na-akụzi asụsụ mba ọzọ nụzọ na-atọ ụtọ na-enweghị ike ọgwụgwụ.
Nịbụ ngwa zuru ụwa ọnụ, Duolingo, nke enwere ike iji na Windows Phones na mbadamba na kọmputa na Windows 10, na-abịa na ngwa English kpamkpam nke onye ọ bụla nwere ike iji ngwa ngwa. Nime ngwa a na-enye ntụrụndụ na agụmakwụkwọ ọnụ, ị nwere ike ịmụta asụsụ ndị a na-asụ nụwa niile, ọkachasị Bekee, site na iji nkeji ole na ole kwa ụbọchị. Nagbanyeghị ọkwa ị bụ, ị nwere ike ịchọta ọdịnaya kpọmkwem maka gị.
Ihe dị mma gbasara Duolingo bụ na ọ na-enye mmega ahụ dabere na ọkwa mmadụ. Ma ị na-ekele asụsụ nke ị na-amachaghị nke ọma, ma ọ bụ na ị na-eche echiche imeziwanye asụsụ mba ọzọ gị. Ndị a bụ mmega ahụ dabara maka ọkwa gị. Nezie, ịkwesịrị ịmepụta profaịlụ iji nweta uru nke njirimara a. Ọ bụrụ na ị bụbu onye ọrụ Duolingo, ị nwere ike iji akaụntụ gị dị wee banye wee malite iji ya na kọmputa gị.
Duolingo, nke na-emelite ọdịnaya ya mgbe niile ma na-ekewa mmega ahụ ya, na-echetara onye ọrụ na nkuzi ọhụrụ amalitela, bụ ngwa mara mma nke na-amasị ndị chọrọ ịmụ bekee nụzọ dị ngwa, na-atọ ụtọ na nefu.
Nha faịlụ: 9.00 MB
Kacha ọhụrụ na: 02-01-2022